Global Voices teny Malagasy » Fahasalamana manerantany: Ny “Gripan-kisoa” an-tsary · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Jolay 2018 20:34 GMT 1	 · Mpanoratra Juhie Bhatia Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Avaratra, Amerika Latina, Angletera, Etazonia, Hong Kong (Shina), Kolombia, Meksika, Shina, Fahasalamàna, Mediam-bahoaka, Saripika
Na dia nilamindamina aza ny ahiahy momba ny firongatry ny “gripan-kisoa” dia mbola nitohy ny fiparitahan'ny viriosy nanerana izao tontolo izao . Antsoina ihany koa hoe viriosy H1N1, nanambara  ny Sampan'ny Firenena Mikambana Momba ny Fahasalamana (OMS) fa olona miisa 4 379 no tratran'ity viriosy ity (2009) tany amin'ny firenena miisa 29, ary 49 no maty noho ny aretina.
Etazonia sy Meksika no nahitana tranga betsaka indrindra tamin'ny viriosy, na dia hita tany amin'ny ankamaroan'ny kaontinanta aza no nitrangan'izany. Mampiseho ny tranga rehetra voamarina sy ny fahafatesana rehetra tamin'ny ankapobeny avy amin'ny viriosy H1N1 ity sarintany  ity. Nahitana ny fiantraikan'ny aretina sy ny fanehoan-kevitry ny olona ireo sary avy amin'izao tontolo izao.
Nalaina tany Meksika ity sary  ity, izay toerana nahafatesan'olona betsaka indrindra noho ny viriosy. Nilaza ny OMS fa araka ny tatitra avy any Meksika dia miisa 1 626 no voan'ny aretina, ary tafiditra tao anatin'izany ny fahafatesan'olona miisa 45.
Noho ny firongatry ny gripan-kisoa, izay voamarina tany Meksika tamin'ny volana Aprily 2009 dia nanome baiko ny fanakatonana  avy hatrany ny sekoly, ny mozea, ny tranomboky ary ny teatra tany an-tanandehiben'i Meksika ny governemanta tao amin'ny firenena. Mampiseho ny Mozean'ny Antropolojia Nasionaly tao an-tanandehiben'i Meksika izay nakatona ity sary  ity. Niverina nisokatra  indray ny oniversite, ny fiangonana ary ny tranombakoka ary toy izany ihany koa ny sinema, ny trano fisakafoanana ary ny toerana fanaovana fanatanjahan-tena. Saingy tsy mbola niverina tany an-tsekoly ireo ankizy madinika.
Nandritra izany fotoana izany, maro ireo sekoly no nihidy nanerana an'i Etazonia, raha nitatitra ny OMS fa nahitana ny trangan'ny gripan-kisoa miisa 2.254 tany an-toerana, anisan'izany ny olona maty miisa roa. Ity sary  ity dia mampiseho ny sekoly iray tao Fort Worth, Texas, izay nakatona noho ny fiparitahan'ny H1N1. Nilaza ny Foibe ho an'ny Fanaraha-maso sy ny Fisorohana ny Aretina fa tokony haverina hosokafana indray ny sekoly satria malefaka kokoa noho ny niheverana azy teo aloha ny viriosy. Na teo aza izany dia mpianatra manodidina ny 468.000  nanerana ny firenena no efa voakasiky ny fanakatonana.
Nahatonga fisavoritahana ny fahitana ny fisian'ny H1N1 tany am-boalohany rehefa nanomboka niparitaka tao an-tanandehiben'i Meksika izany, hoy ny mpaka an'ity sary  ity. Mampiseho ny talatalana foana tao anaty fivarotan-dehibe tany atsinanan'ny tanàndehiben'i Meksika ity sary ity. Nilaza ihany koa ilay mpaka sary fa nohamafisin'ny manampahefana fa tsy hisy ny tsy fahampian'ny sakafo sy ny fanafody, ka nampihena ny fanangonan-tsakafo izany.
Na tao an-tanandehiben'i Meksika  na tany New York , dia nampiasa saron-tava mba hisorohana ny gripan-kisoa ireo olona any amin'ny toerana mihiboka toy ny metro satria mifindra amin'ny olona amin'ny alàlan'ny kohaka sy ny evina ny viriosy. Saingy nisy adihevitra  be teo amin'ny hoe tena mahaaro tokoa ve ny saron-tava .
Na dia izany aza, maro ireo olona no nampiasa saron-tava mba hiarovan-tena, indrindra rehefa mandeha fiaramanidina, na ireo ekipan'ny zotram-piaramanidina na mpandeha. Ato amin'ity sary  ity, manao saron-tava ny ekipa mpanamory raha miandry ny entany tao amin'ny seranam-piaramanidina ao Bogota izy ireo.
Mampiseho ny fisavorovoroana izay nitranga tany amin'ny Fanjakana Britanika ihany koa ity sary  ity, izay nahitana ny trangana gripan-kisoa niisa 39. Noho ny valan'aretina dia nanambara  ny Sampan-draharahan'ny Fiarovana Ara-pahasalamana Britanika fa voaavaky ry zareo ny kaody zenetika fenon'ny viriosy H1N1, dingana voalohany amin'ny famokarana vakisinin'ny gripan-kisoa vita Eoropeana .
Mampiseho ny ‘ascenseur‘ [fanakadrihana] tao Hong Kong izay nodiovina matetika mba hisorohana ny gripan-kisoa ity sary  ity. Na dia iray monja aza ny tranga nisy tany Shina dia efa nandray fepetra henjana ny firenena mba hisakanana ny fihanaky ny viriosy. Ohatra, tamin'ny 8 May  2009 dia tsy namela ny fivezivezena nandritra ny herinandro tao amin'ny trano fandraisam-bahiny iray izay nijanon'ny Meksikanina iray nararin'ny gripan-kisoa i Hong Kong, ary namoaka olona miisa 280 teo ho eo izay natokana tao amin'ilay tranobe.
Farany, ato amin'ity sary  ity dia mivory ao amin'ny Katedralin'ny Tanandehiben'i Meksika ny olona. Nilaza ilay mpaka sary fa nivavaka ho an'ny marary, ny governemanta ary ny sisa amin'ny fiarahamonina izy ireo ary nanantena fa mba “handray fanapahan-kevitra tsara” izy ireo hanoherana ny valan'aretin'ny gripan-kisoa ato amin'ny firenenay. “
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/31/123998/
 Niverina nisokatra: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8036568.stm
 an-tanandehiben'i Meksika: http://www.flickr.com/photos/eneas/3471986083/
 New York: http://www.flickr.com/photos/swerz/3492314711/
 8 May: http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5h-jV4N2i3r_22w5fuxZnNwutEx9g